Buying Guides Archives - Page2of2- Myanmar End User
Pro ကင်မရာ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်..?? ဘယ်ကင်မရာ ဝယ်ရမလဲ..?? ဘယ်မှန်ဘီလူး ဝယ်ရမလဲ..?? ငွေဘယ်လောက် သုံးရမလဲ…?? Nikon ကောင်းလား..?? Canon ကကောင်းလား..?? Sony ကရော ဘယ်လိုနေလဲ…?? စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြပါတယ်/ တကယ်တော့ Canon ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Nikon ပဲ ...
Xiaomi Phone တစ်လုံး ဝယ်ယူရာတွင် သတိထားရမည့် အချက်များ
Redmi Pro နဲ့ Redmi Note4ကတော့ လောလောဆယ် ဘာအသံမှမကြားရသေးပါဘူး။ Xiaomi Phone တစ်လုံးဝယ်ရင် Error ကင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်ယူနိုင်ကြပါစေ။ Sim card မသိတဲ့ပြဿနာ Redmi Note3Pro ဝယ်ယူရာတွင် MPT ...
October 11, 2017 130598 views
October 12, 2017 95027 views
February 24, 2017 48633 views